Amaphupho ngenhlanzeko – iAfrika
Asho ukuthini amaphupho ngenhlanzeko? Lokhu kuhlanganisa ukugeza, ukungcola nokuhlanzeka, izindawo ezingcolile nodoti.
Tags Inhlanzeko, Ukugeza
Ukuphupha indle noma indlu yangasese kuchaza ukuthi kusuke kukhona umuntu okusebenzisela umuthi ongalungile obizwa ngesichitho owenza ukuthi ungathandeki noma ungalungelwa yilutho othi uzama ukulenza.
Tags Indle, Izindlu zangasese
Uma uphupha ukuthi ulahla udoti noma izibi kuwuphawu olubi. Kusho ukuthi ulahla amathuba akho futhi uzolahlekelwa ebhizinisini maduzane nje. Amaphupho ngokungcola nokuhlanzeka.
Amaphupho ngezindawo ezingcolile
Uma uphupha ukuthi usebenza nomanyolo engadini wuphawu oluhle ngoba maduzane uzoba yisigwili. Uma uphupha ukuthi usendaweni lapho okulahlwa khona izibi kufanele uqaphele imiphumela yezenzo zakho. Izindlela zakho ezingcolile zingakudalela inkinga maduzane.
Uma uphupha ukuthi uyageza kungasho izinto ezinhle noma ezimbi. Uma amanzi emile noma esendlini yokugeza kusho ukuthi uzoba nenhlanhla maduzane noma uzoya endaweni ezokulethela injabulo. Uma uphupha ugeza ngaphandle kwendlu noma emanzini agelezayo kusho ukuthi uzoba nebhadi futhi uzodumala. Ukuphupha ugeza umuntu wesilisa uma ungowesimame lokho kusho ukuthi loyomuntu osuke umphupha usuke enesilwane athweswe sona … Read more